Ifektri Yogandaganda, Abahlinzeki - Abakhiqizi BaseTshayina BaseChina
Injini yedizili yokuhamba inesakhiwo esilula futhi esihlanganisiwe, isisindo esikhanyayo, singasetshenziswa kabanzi kwinkambu ehlukahlukene, njengasemapulazini amancane, izivini, ingadi yezimbali, abamba ukushisa ngokufanele bakulungele insimu yezintaba.
I-18HP yokuhamba ugandaganda / uhambe ngemuva kwegandaganda oem
I-4 × 4 yezoLimo Diesel Mini Ugandaganda 4wd Ngekhabethe / I-sunshade
Ugandaganda onamasondo amane luhlobo lokudonsa ngebhodlela nokushayela ngokusebenza kwalo ngokuphelele, kulula ukusebenziseka nazo zonke izinhlobo zemishini yasepulazini. Isetshenziselwa kakhulu ukulima, ukutshala ujikelezo, ukuhlwanyela, ukunisela, ukufafaza, ukuvuna kanye nokuhamba njll .. Emasimini e-paddy, emhlabathini owomile, emhlabathini owomile, nasezivandeni.
I-12hp 15hp 18hp 20hp 2 wheel drive amanani amancane egandaganda
Ogandaganda abasha abangama-mini abasebenza ngezinto ezihlukile, kufanelekile amathafa, izintaba nezindawo ezinamagquma, kuhlangene namathuluzi afanele atholakala ukulima, ukulima ujikelezo, ukuvuna, ukutshala, ukupompa neminye imisebenzi.
Lokhu ngogandaganda wethu omusha omusha (ugandaganda omncane), bashintshwa kusuka kugandaganda wokuhamba. Umehluko ngezinhlobo zethu ze-commen wonke amasondo ayo amane angahamba.
I-China Farming Electric trekta 30hp 35hp 40hp 40hp 50hp 55hp 60hp
I-trektha inesici sokusebenza kahle okuphezulu, ukusetshenziswa kophethiloli okuphansi nokusebenza okulula njll. Kusebenza okuningi ngokunamathiselwe okuningi kungafakwa. Ingasetshenziswa kabanzi emisebenzini ehlukene yesikhala efana nengadi, ipulazi, imisebenzi yepaki engaphansi komhlaba kanye nokwakhiwa kwamadolobha.
Amafektri Okuthengiswayo Okungenani Okuyisilinganiso Esincane Epulazini Ingadi Yegandaganda
1) Izinjini ezinokuguquguquka nezinamandla ngokusetshenziswa komoya komoya ophansi —Qinisekisa umkhiqizo wakho nokusebenza kahle.
2) Imiklamo ye-Ergonomic ne-compact —Ngokungcono lapho uthola ukuhlakulela, ukulima, ukulima njll.
3) Izinsiza kusebenza zasepulazini ezingena esikhundleni kabusha — i -rotary tiller, i-trailer, ukuvuna izithako, umshini wokulahla, i-FM mower nokunye.
Kuthengiswa ugandaganda omncane wasepulazini omncane
Ifektri inikezela ngentengo eshibhile
Ikhwalithi ephezulu yamazinga
I-12hp 15hp 18hp kanye nenjini yedizili engu-20hp
AbaseChina bakha ugandaganda wokuhamba ongu-20hp / ugandaganda wesondo omibili
I-12hp ukuhamba kwe-treordordiesel / ukuhamba ngemuva kwegandaganda / kagesi ukuhamba kukaganda ugandaganda
Okusha okwakhelwe ngaphandle ngokuphelele, kuqukethe injini, i-chassis, kagesi, esetshenziselwa ukudonsa nokuhamba.
Ukuhamba ngo-15hp wokuhamba ngogandaganda / umgandaganda wokuhamba omncane / ipulazi ugandaganda onamasondo amabili / abakhiqizi bakagandaganda ababili / abahamba ngogesi ngemuva kwegandaganda
Ugandaganda onamasondo amabili u-10hp wokuhamba ugandaganda / uhamba ngemuva kogandaganda obuthengisiwe
sisebenza kahle kakhulu kugandaganda futhi sithunyelwa ePoland, Spain, Kenya, Pakistan, Costa Rica… njll. Ogandaganda bethu ikhwalithi ethembekile yayaziswa njalo ngabathengi, ngakho-ke sathola iqembu elikhulu lamakhasimende athembela kugandaganda wethu nathi.